Video Torrent na saịtị na Video Torrent Players .
. Torrent video Downloader t
Video iyi saịtị na video iyi Player
Video iyi saịtị ndị dị iche iche nke weebụsaịtị nke ka i nwee ike ibudata videos dị ka akụkọ, ajụjụ ọnụ ma na fim na ngwaọrụ gị maka free nke na-eri. E nwere ọtụtụ video iyi saịtị nke pụrụ inyere gị nweta ihe ọ bụla video ị chọrọ ịhụ ma maka na enyemaka, ndị na-esonụ bụ ndepụta nke n'elu 5 otú ahụ na saịtị:
Top 5 video iyi saịtị
Top 5 video iyi Player
Nkebi nke 1: Top 5 video iyi saịtị
1. Kickass iyi-Kickass iyi bụ nọmba 1 video iyi saịtị na ụwa na bụ otu n'elu ikpo okwu nke na-enyere gị download faịlụ njikọ maka a nnukwu nchịkọta videos si gburugburu ụwa. Site akụkọ na-egosi na TV na site na fim na-ebi ndụ show videos, ihe ọ bụla video na ị pụrụ icheta, Kickass Torrent ga-enye gị. The website awade free nbudata na na-họọrọ dị ka ọnụ ọgụgụ 1 iyi nbudata na saịtị na ụwa.
2. Torrentz-Torrentz bụ ihe ọzọ na-ewu ewu n'elu ikpo okwu nke na-enyere ọrụ ibudata video iyi faịlụ na free nke na-eri na site a pụtara dị mfe usoro. E nwere search engine nyere na saịtị site na nke i nwere ike pịnye na ịchọ video na ị chọrọ na-ekiri. E wezụga nke a, ị nwekwara ike ime ka gị na nhọrọ si edemede ma ọ bụ anatara nyere na saịtị.
3. Extratorrent-ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-bụ kpam kpam risịrị ka ekiri nile di iche iche nke videos, mgbe ọzọ na saịtị nwere ike igosi na-enye aka n'ihi na ị bụ Extratorrent. Nke a na saịtị na-enye gị a dum nhọrọ nke videos na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ị na budata ha. The interface dị ọcha na-achọta gị video dị nnọọ mfe.
4. The Paireti Bay-nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ochie na ọtụtụ tụkwasịrị obi iyi saịtị na ụwa. Ọ na-enye dịgasị mix nke videos gụnyere TV, ihe nkiri sịnịma, akụkọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ị nwere ike mfe ịchọta video na ị chọrọ ibudata site na iji kọmputa ede aha ya na search igbe nyere na n'ụlọ peeji nke saịtị. E wezụga videos, ị nwekwara ike chọta ọtụtụ ndị ọzọ na mmiri iyi gụnyere music, egwuregwu na ọtụtụ ndị ọzọ. Saịtị bụ ugbu a dị n'ụdị nke ya mbipụta na clones.
5. Izohunt.to-a bụ ikpo okwu nke e malitere mgbe Isohunt.com e mechie na bụ ọzọ a n'elu ikpo okwu nke awade ọtụtụ puku ndị video torrents n'ihi na ị na ibudata. Nke a website bụ a enem n'elu ikpo okwu na-ala virus oria njikọ ọgụgụ na bụ nnọọ mfe iji.
Nkebi nke 2: Top 5 video iyi Player
Ugbu a na ị maara ihe kasị mma saịtị ibudata iyi faịlụ, nzọụkwụ ọzọ nke na-abịa bụ na-ekiri ebudatara videos. Mkpa ka i nwere ezi iyi video ọkpụkpọ na gị usoro na-enwe ike iji na-enweta vidiyo. E nwere ọtụtụ ezi nhọrọ nke video iyi Player na ọ pụrụ ịbụ nnọọ mgbagwoju anya iji họrọ otu nke kasị mma. Bụ nke a mere anyị na-ada gị a ndepụta nke n'elu 5 video iyi Player na ọ bụ nyere ka ndị a:
1. VLC-otu nke kasị mma na eluigwe na ala video ọkpụkpọ ma ọ bụ iyi ọkpụkpọ na nke ị pụrụ ịnụ ụtọ ọ bụla dị iche iche nke video faịlụ bụ VLC. Nke a n'elu ikpo okwu-ewu nnọọ ewu na ụbọchị ndị a, ọ na-abịa arụnyere na gị na usoro. Ọ bụ na-emeghe iyi, cross n'elu ikpo okwu na ukwuu obere free media ọkpụkpọ. Ị nwere ike ibudata ya site na iji ezi media nbudata website. Http://www.videolan.org/vlc/index.html
2. km player- nke a bụ a fechaa video na ọdịyo ọkpụkpọ nke na-arụ gị iyi video faịlụ na nke kacha mma mma. Ọ bụ nkecha, mfe iji na-abịa na ọtụtụ njikwa na nhọrọ mee ka gị na video ekiri ahụmahụ ụtọ. Ọzọkwa, ọ bụ ukwuu customizable nke pụtara na ị nwere ike ịgbanwe ya Otú ọ dị na ị chọrọ. Http://www.kmplayer.com/
3. Wondershare ọkpụkpọ-bụ ihe ọzọ na-ghar n'elu ikpo okwu site na nke ị pụrụ ịnụ ụtọ videos nke gị nhọrọ gụnyere fim, TV na na akụkọ wdg bụ Wondershare ọkpụkpọ. Nke a bụ ike mgbasa ozi ọkpụkpọ nke nwere ike igwu fọrọ nke nta ọ bụla usoro nke vidiyo na-arụkwa audios ke kasị mma o kwere omume. Ọ nwere onye kensinammuo imewe na ezi HD audio mma. Http://www.wondershare.com/video-player
4. Monavi Video Ntụgharị-nke a bụ a vasatail iyi ọkpụkpọ nke nwekwara-enyere gị iji tọghata videos ka adabara formats mgbe ha na-ebudatara site iyi. Ị nwere ike ịnwale ikpe mbipute nke bụ free nke na-eri tupu nbudata ugwo version. Nke a ọkpụkpọ bụ maa otu nke kasị mma si n'ebe. Http://www.movavi.com/videoconverter/
5. Wondershare video Ntụgharị kacha-nke a bụ a video ọkpụkpọ nke ọ bụghị nanị na-akwado nile di iche iche nke iyi video faịlụ kamakwa arụ ha na ihe ọ bụla dị iche iche nke sistem gụnyere Mac OS. I nwekwara ike iji nke a mgbasa ozi ọkpụkpọ iji tọghata gị video formats mere na ha nwere ga-agafere ngwaọrụ ndị ọzọ maka mfe na enweghị nkebi ikiri. Http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html
> Resource> Music> Video Torrent na saịtị na Video Torrent Players